ABWAAN HUBUROW TAARIIKH NOLOLEEDKIISA OO KOOBAN
Saturday October 21, 2017 - 17:03:48 in Featured by Super Admin
Xasan Maxamed Nuur oo loo yaqaano Xassan Huburow wuxuu ku dhashey degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose sanadka markuu ahaa 1969 . Wuxuu ku soo barbaarey degmada Baydhabo ee Gobolka Bay. Heerkiisa waxbarasho waa ilaa dugsi dhexe kuna qaatey degmad
Xasan Maxamed Nuur oo loo yaqaano Xassan Huburow wuxuu ku dhashey degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose sanadka markuu ahaa 1969 . Wuxuu ku soo barbaarey degmada Baydhabo ee Gobolka Bay. Heerkiisa waxbarasho waa ilaa dugsi dhexe kuna qaatey degmada Baydhabo. Yaraantiisa wuxuu ku biirey kooxda fanka ee Ubaxa Kacaanka Soomaaliyeed. Heesta uu ugu jeclaa xiligaas isla markaasna meel masrax ah ka qaado waxay ahayd ,
``kalmaduhuuw Siyaad yiri
Karti iyo wax qabasho
Qofka nagu karahayoow , kacaan diid
Dib usocod , kir baan ku leenahay
Afminshaar yur baan ku leenahayÂ´Â´
Kadib Xasan Huburow wuxuu ku biirey Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed . Isla markaana wuxuu kas mid noqdey kooxdii Horseed ee qaybta Lixdanaad ee Baydhabo ilaa dawladdii dhexe ee Soomaliya meesha ay ka baxdo.
Xassan Huburow Dawladdii Dhexe markey burburtey fankiisa ma joojin , wuxuu ku birey kooxdii Arlaadii . Kooxda Arlaadii oo noqotey koox caan ah . Waxaana ka mid ahaa fanaaniintii iyo abwaanadii waqtigaasi Abwaan Tarash , Abwaan Eden Mad Isaaq , Abwaan Cali Bin Cali , Abwaan Muxudiin Lamadaarashooda , Nuurto Arlaadi , Qoomaal , Muumina Saqaawe , Musikiste Bitiyeey , Al fanaan Baaruudey iyo kuwu kaloo badan . Kooxdaasoo guubaabin jirtey umadda Soomaaliyeey gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed.
Ka dib Xasan wuxuu ka mid noqdey fanaaniintii Kooxda Waaberi iyo Kooxda Shanbal ee ka qaybgaley shirkii lagu heshiisinaayey Sooomaalida ee ka dhacay Degmada Carta wadanka Djabouti 2000 . Shirkaasoo lagu soo dhisey Dawladdii madaxweynaha uu ka noqdey Cabdi Qaasim Salaad . Xasan Huburow oo si gaar ah uu uga tirsanaa Kooxda Shanbal ee madaxna uuw ka ahaa Alla ha u naxariisee Abwaan Sahal Macalin Ciise.
Xasan mudo 16 sano ahayd wuxuu si nabad ah ugu noolaa Djabouti isagoo fankiisa meeshaasii kasii wadey . Sanadkii 2014 bishii Oktoobar 14 keedii wuxuu dib ugu soo laabtey Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho . Isla markiiba wuxuu ku biirey kooxda qaranka Heegan ee ciidanka Booliska Soomaaliyeed . Wuxuuna ka qayb galey bandhig faneedyo waa weyn ee ka dhacay Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya . Haatan darajadiisa waa Xidigle Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho Soomaaliya .
Xasan waa Abwaan Qaran , waa heesaa , wuxuu tumaa kabanka iyo welibana wuxuu saaraa heesaha laxanka ugu wanaagsan . Xasan heesaha uu tiriyey , kuwa laxanka uu saarey iyo kuwa uuw codeeyey tiro laguma soo koobikaro.
Hase ahaatee Xasan maanta waxa uu la il daranyahay xanuun ku soo boobey oo aan lagu daweyn karin wadankeena Soomaaliya . Marka waxaan Ilaah uga baryeeynaa inuuw caafimaad taam ah siiyo . Qofkii wax tari karo , intuuw noolyahay wax tar .